Welcome na-emetụta mmepe nke ime obodo na karịsịa n'ụlọ gị obodo.
Kpọtụrụ anyị maka ajụjụ
14/3 -17: N'ikpeazụ eriri oge! – Nye t.o.m. 31/3!
15/12 -16: mkpebi: N'eziokwu enyemaka maka eriri ka Holm!
30/1 -16: Extraordinary Nzukọ Holm Fiber
10/5 -15: Holm Fiber Nzukọ Kwa Afọ: Gụọ ihe ọhụrụ ozi ọma!
28/10 -14: Holm Fiber - Ọganihu Report!
17/1 -14: Holm Fiber: Info nzukọ maka òtù na ndị ọzọ nwere mmasị
8/12 -13: Holm Fiber na Sundsvall Tidning
30/11 -13: Jikọọ Holm eriri mkpakọrịta na-enwe ohere eriri brọdband!
19/10 -13: Holm eriri Economic compound
14/6 -13: Aha gị mmasị ugbu a maka eriri brọdband! Mụta banyere uru!
Rịba ama (maka ọhụrụ òtù ma ọ bụ ẹkụre ihe aga-eme):
Wet ke nnọọ ihe ọmụma dị ka o kwere.
* = Choro ubi
adreesị nzipu ozi:
Zip koodu na obodo:
ọzọ ekwentị (t.ex. home / ọrụ / ibe):
residential- ma ọ bụ obi:
-ezipụta "ụlọ" ma ọ bụrụ na onye na-aha na ihe onwunwe.
Bụ n'ebe ọ bụla ụlọ ọrụ ma ọ bụ mkpakọrịta aha na adreesị:
OBS! Medlemsavg. (100:-) na årsavg. (100:-), ngụkọta 200:- nkwụnye ka BG 500-0229.
Dee ihe onwunwe designation na aha dị ka ndị ozi, nke mere na anyị maara na sender.
OZI OM Holm eriri
Anyị na-ewetara ndị na-arụ ọrụ na-aga n'ihu iji hụ na anyị n'ala nna ga-enwe ohere nke dị oké mkpa brọdband netwọk anyị n'ala nna na-anọgide na-adị ndụ na ịzụlite na-eme n'ọdịnihu. Ka anyị na-enye ụmụ anyị na ụmụ ụmụ ya na ndị ọzọ ohere nke ịdị ndụ na anyị mara mma n'ala nna.
Ná mmalite October 2013 kpụrụ Holm Fiber Economic Association nke na-agba ọsọ ngo. The ọrụ a lekwasịrị anya na-enye obodo ntà ezigbo ala na ụlọ na ndị ọzọ arụmọrụ gburugburu Holmsjön n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ Jämtland Medelpad-esịne ke oru ngo. The osisi bụ ụmụ mmadụ ndị n'ụzọ nwere agbatị obodo nta nile dị na iche na nke na-arụ ọrụ.
Anyị a gafere mmalite na ọ na-eme ugbu a bụ a okwu na ụfọdụ usoro suppliers ebe anyị banye kwesịrị ikpebi onye e kwesịrị nyere na-ebu ngo. Ngo bụ na-na na nke ndị ọzọ. County Nlekọta Board na Board of Agriculture ime n'ihi na enyem aka ịzụlite anyị n'ime ime obodo.
Anyị na-enye unu niile ndị bi ma ọ bụ nwere ndị ọzọ ụdị ezigbo ala na ụlọ ma ọ bụ ulo oru gburugburu Holmsjön isonye na oru ngo. The mkpakọrịta mejupụtara niile Njirimara na kwuputela mmasị ha na-akwụ otu ego na-enwe kwa afọ ego na mkpakọrịta. The otu ego bụ 100:- na-enwe kwa afọ ego bụ 100:- i.e. ngụkọta 200:-. Ugbu a, anyị nwere ihe fọrọ nke nta 200 onwunwe nwe ke mkpakọrịta otú ahụ bịaranụ bụ ihe ọma na anyị mma banyere ọdịnihu nke na-arụ ọrụ.
OBS! Mgbe ị na-esonyere ndị na-akpakọrịta, ị na-ekweta na-na-ekere òkè na mezue oru ngo, ma mgbe ị na-adịkwaghị chọrọ isonye na chọrọ ọwọrọde regains ị otu ego ma ọ dịghị kwa afọ ego maka ya bụ ụzọ anyị na-eji atụmatụ na imewe ọrụ. Naanị ihe ị n'ihe ize ndụ na-na na 100:-.
Anyị na-enye bụ maka onye ọ bụla na-na. Ka ndị ọrụ na-enwe ọganihu otú anya na anyị nwere ike na-enye ihe ngwọta, niile nke na mkpakọrịta na-abịa ọnụ na-ahụ nyere a chọrọ ihe ngwọta ma okwu nke ego ndokwa na kwesịrị ekwesị na omume nke na-arụ ọrụ. Na steeti na-ewe ọ bụla so na a mkpebi na ma na-ekere òkè ma na-brọdband arụnyere ma ọ bụ na-adakpọ na nzọụkwụ nke compound na-agbake ya dues.
Kọọrọ ndị agbata obi, ndị enyi n'ụlọ nwe, wdg, ma hụ na onye ọ bụla nwere ohere na-na.
Anyị ga-nọgidere wepụta ọmụma, ihe ndị ọzọ, na anyị Facebook page na ndị ọzọ na forums na-mkpa. Anyị chọrọ ka ị na-agbasa ma na-eso nke a ọmụma. Ga-amasị gị inwe na aka anyị, ị nwere ike ide na anyị e-mail address holmfiber@gmail.com ma ọ bụ na-akpọ onye na osisi ma ọ bụ anyị correspondents, kọntaktị nkọwa, anyị ga-ịgbakwunye mgbe e mesịrị.
N'ihi Holm Fiber Board
site Stefan Edin